पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घट्यो ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घट्यो !
काठमाडौं । भारत सरकारले बिहीबार पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाएको छ । पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर भारतीय २ रुपैया ५० पैसा घटेको हो । सरकारी अधिकारीहरूले घटाएको मुल्य तत्कालै कार्यान्वयन हुने पनि उनीहरूले बताएका छन् । मुल्य घटाउन सरकारले तीन बँुदे योजना बनाएको समेत जनाएको थियो ।
त्यसैगरी तेलको मुल्य घटाउने तेस्रो उपायको रुपमा वित्तमन्त्री जेट्लीले प्रदेश सरकारहरूलाई पनि कर कटौती गर्न लगाएको छ । उनका अनुसार प्रदेशमा त डिजल र पेट्रोलको प्रतिलिटर भारतीय पाँच रुपैया सम्म पनि मुल्य घट्न सक्नेछ । भारतको महाराष्ट्र र गुजरात प्रदेशमा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले प्रतिलिटर भारतीय दुई रुपैया ५० पैसा घटाउने घोषणा गरिसकेको जनाइएको छ ।
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरुले १० मिनेटमै शरीरका जुनसुकै भागमा रहेका क्यान्सरयुक्त सेल पत्ता लगाउने […]
जमिनमुनिको पानी धेरै तान्दा के हुनसक्छ त्यसको परिणाम ? यस्तो छ उदाहरण
एजेन्सी । जमिनमुनिबाट अत्यधिक मात्रामा पानी तान्यो र भूमिगत पानी 'रिचार्ज' हुन पाएन भने त्यसको परिणाम के […]
एजेन्सी । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा चर्किएको आन्दोलन फ्रान्समा हिंसात्मक बन्दै गएको छ। […]